Yenyu Bhizinesi reIndaneti Vs. New Competitors - 3 Mazano Anotyisa Kubva Semalt
Kuzarura dare rekutsvaga ndiro basa rakananga. Kuzarura chitoro chenyama kunogona kuva achinetso chakaoma. Inosanganisira nzira dzakadai sokuchengetedza kuchengeta, kurongedza zvinhu zvekutenga mashefuti uye kubhadhara nzvimbo yekudzikinura. Zvisinei,iyi haisi iyo yekombiyuta e-commerce. Chero munhu ane ruzivo ruzivo ruzivo anogona kugadzira kutanga nekuita mari yakanaka kubvaiyo huru internet resource.
Ne ruzivo urwu mupfungwa, zviri pachena kuti chero yekutanga bhizimusi kana bhizimisiizvo zvatovepo zvinogona kutarisana nekukwikwidza kwakasimba kubva pakutanga kwekutanga kweInternet - metal and glass outdoor bar. Vazhinji vevatsva vatsva vanowedzera mari pa SEO uye vakapa zviziviso kunekuwana chikamu chemusika pane imwe niche.
Bhizinesi rezvebhizimisi rine nguva yakareba yekugadzirisa rinogona kukwikwidzana nekutangira kwakadaro,kutevera zano rakapiwa naKan Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira Semalt .
1. Shandisa Maitiro Okudhinda Kwekugadzira.
Nzira dzekutengeserana kwetsika dzinosanganisira kubhengetedza mabhendi, kushambadzira kwePPC, uye kunyange chiberekokuisa panzvimbo dzakabudirira dzakadai seAmazon uye eBay. Zvisinei, mabhizimusi makuru anoshandisa nzira dzokugadzira dzakadai sekubhadhara kunyoreswa. Semuyenzaniso,kambani inogona kugadzira gig, iyo inokumbira mutengi kuti atore chikamu. Muchikamu ichi, mutengi anogona kuita sarudzo yekukumbiraimwe imwe yekutora. Kutumira kwakadaro kunotungamirira kukutengesa kwepamusoro kudarika kubhadhara PPC zviko.
Nzira dzekutengesa dzehutano sezvinoitwa mavhidhiyo mavhidhiyo ekukurudzira vatengi vako..Kubudisa mitambo yezvemagariro evanhu uye email zvakatevera zvinokwanisa kugovana Kugovana kwakanaka kune SEO pamwe nekuwana vatengi vakananga. Muzviitiko zvakawanda, vanhushare content kuvanhu vanova vatengi pakarepo.
2. Ipa Stellar Customer Service.
Kupa rubatsiro rwemhando yepamusoro yevashandi haisi kureva vatsva vatsva. Somutengesiuyo ave ari mubhizimisi kwenguva yakareba, iyi ndiyo munda umo ruzivo rwako runotanga kushanda. Somuenzaniso, mumwe ane mukana wekupa vatengiunyanzvi hwevashandi. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, unogona kukumbira muteresi kuti afanane nehutano hwemagariro evanhu kana kutomboongorora pane Google. Stellarvatengi vanogona kuumba ruzivo pamusoro pevateveri vavo uye vanowana vamwe vashandi vatsva.
3. Ipa Zvipo Zvimwe.
Muzviitiko zvakawanda, vatengi vanoenda kumutsvapikiti mutsva ndivo vashandi venyu vekare. SEOkunosanganisira kugovana nekutsvaga kwevhesi yekusatsvaga kusvitsa mune vamwe vanoongorora Somugumisiro, unoda hurongwa hwokudzorera nheyo yako yekare yevatengi.A-close-up email marketing inogona kuva sarudzo yakanaka. Mumwe anogona kutanga nokutenda avo vaimbova vatengi uye kupa chikamu pamutengo wakaderera.Mune zvimwe zviitiko, sanganisira chipo chepachena chechinhu chavanotenga. Kana ukangodzorerazve vatengi vako, unogona kudzokera kune maitiro ekudhinda akawanda.
Vazhinji vezvemabhizimisi, avo vari kuita bhizinesi rekutsvaga, vanotarisana nekukwikwidza kwakasimbakubva pakutanga. Vanhu vanoenda kumakambani ekutengeserana maitiro ematanho eSeO uyewo kana mupikiswi mutsva anooneka ari panzvimbo,pane kuderera mumugwagwa uri kuuya kune webhusaiti yako. Ichi chinoshamisa chinoita kuti yese SEO inoratidzike pasi semakwikwiinotora nzvimbo mumigumisiro yeSERP, kuwana chikamu chemotokari yako. Zvisinei, munhu anogona kudzorera bhizinesi kune zvisizvo, saka kukwikwidza kunogonakunyorera. Nezano iri pamusoro, unogona kukunda vashandi vako nekudzorerazve nzvimbo yako yepamusoro.